lin lin's Page - MyanmarITPro - A Social Network for Myanmar IT Professionals
Blog Posts (1)Discussions (25)EventsGroups (10) lin lin's Likes Lin lin's Friends
View All lin lin's Groups
SCWCD (Sun Certified Web…
lin lin's Discussions
I want to know The file Type size of video or music
Which is the greatest file size and which is the smallest file size between wmv,vob,mp4 and avi.Continue Started Aug 1, 2012 Blog တင်ဖို့အကြောင်း
ှုညီမကsoftware engineer ဖြစ်ချင်သူတစ်ယောက်ပါ။ကျွန်မ onlineပေါ်မှာကိုယ်ပိုင် blogတစ်ခုတင်ချင်လို့ပါ။ကျေးဇူးပြုပြီးကူညီကြပါရှင်။Continue Started this discussion. Last reply by Phyo Wai (ဗျိုင်းဖြူ) Jul 17, 2012. unicode ရဲ့ASCIIကိုသိချင်လို့ပါ။
myanmaritproမှအစ်ကိုအစ်မများရှင်။unicode ရဲ့ASCIIလေးများသိရင်ပြောပြပေးကြပါရှင်။char စစ်တဲ့အချိန်မှာအလုပ်မလုပ်လို့ပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ Started May 30, 2012 မိဘတွေနဲ့သားသမီးကြားကပဋိပက္ခ
မိဘတွေက IT က စီးပွားဖြစ်လုပ်စားလို့မရဘူးဆိုတဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုဘယ်လိုပြန်ပြီးချေပရမယ်ဆိုတာ myanmaritproက ညီအစ်ကိုမောင်နှမအားလုံးအကြံပြုခိုင်းစေချင်ပါတယ်။ Continue Started this discussion. Last reply by naychitkyaw Sep 25, 2011. View All
lin lin has not received any gifts yet
lin lin's Page
lin lin replied to nandakyawswar1's discussion ကူညီပေးကြပါအုံး"kasper နဲ့မရရင် microsoft essential securtiy ကိုသုံးကြည့်ပါလား"Feb 27, 2013lin lin replied to JimSamMee's discussion ITPEC EXAM အကြောင်း"သိသလောက်တော့ မန်းလေးမှာစာအုပ်ရှာဝယ်လို့ရပါတယ်။ကျွန်မလည်းလေ့လာဆဲမို့မပြောနိုင်သေးပါဘူး။စာအုပ်က7000ပေးရပါတယ်။မန်းလေးကွန်ပျူတာအသင်းမှာဝယ်ရတာပါ။"Dec 8, 2012lin lin leftacomment for C#"အခု C# မှာအခက်အခဲတစ်ခှုရှိနေလို့ပါ။ datagrid မှာမြန်မာလိုမပေါ်လို့။ကူညီကြပါအုံးရှင်။"Nov 10, 2012lin lin addedadiscussion to the group PHPPhp ကိုစတင်လေ့လာခြင်းPhp ကိုစလေ့လာမယ်ဆိုရင်ဘာတွေလေ့လာဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြပေးပါ။အစ်ကို၊အစ်မများရှင်။ကျွန်မက php ကိုလေ့လာဖို့ ကြိုးစားနေတာပါ။ဘယ်ကဘယ်လိုစရမှန်းမသိတာကော။ဆော့ဝ်၀ဲရှာလို့မရတာကောကြောင့်ပါ။ကျေးဇူးပြုပြီးကူညီပါအုံးရှင်See MoreOct 27, 2012 0
lin lin joined Htoo Maung Thait's groupPHPThis group is intended for study of PHP, discussing some issues, question and answer etc.Oct 27, 2012 1
lin lin replied to ATS PTU's discussion how to Change the setting of my phone to connect the internet"အရင်ပြန်မေးရမယ့်စကားက ဖုန်းရဲ့အမျိုးအစားသိမှပြောပြလို့ရမှာမို့
ပြောပြပေးပါအုံး"Oct 15, 2012lin lin and phyuphwe are now friendsAug 1, 2012lin lin postedadiscussionI want to know The file Type size of video or musicWhich is the greatest file size and which is the smallest file size between wmv,vob,mp4 and avi.See MoreAug 1, 2012 0
lin lin replied to Min Thura's discussion How to open .do file?"Min Thura are What is The Version OF Office ? I think first u should look the version of office u have. If the version 2007 it should write name.docx."Jul 29, 2012lin lin replied to DaKyat's discussion Networking နဲ့Programming....ဘယ်ဟာပိုလွယ်သလဲ????"ကိုဇော်ထက်ပြောတာကိုလက်ခံတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်တမ်းလက်တွေ့မှာအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်software သမားက software ပဲရေးတယ်ပြောတာတစ်ခါတစ်ရံမှာnetwork အကြောင်းလိုက်လေ့လာရတာကိုကြုံဖူးတယ်။တော်ကြာsoftware ပဲလေ့လာထားပြီး software errorလားnetwork…"Jul 26, 2012lin lin replied to Min Thura's discussion How to open .do file?"I tell u what i know. But it can be work or not. Firstly, u must right click ur document which u want to open and then click properties and then u must choose the tab as general and u must change the text as name.doc."Jul 22, 2012lin lin joined C#'s groupC# DeveloperJul 20, 2012 81
Phyo Wai (ဗျိုင်းဖြူ) replied to lin lin's discussion Blog တင်ဖို့အကြောင်း"blogspot.com မှာ... blogger လို့လဲခေါ်တယ်ပေါ့.. google service ပါ။ သူကတော့ရိုးရှင်းတယ်... web knowledge မရှိသေးပဲ..အခုမှစမယ့် beginners တွေအတွက်တော့ကောင်းပါတယ်...ဒါပေမယ့် သူက အိမ်ငှားနဲ့တူတယ်ဗျ.....လုပ်ချင်တာကိုလုပ်လို့ အားလုံးမရဘူး....ဆိုလိုတာက…"Jul 17, 2012Ye`Mon Aung replied to lin lin's discussion Blog တင်ဖို့အကြောင်း"ကျွန်တော် blog တစ်ခုကိုဘယ်လိုစရေးရမယ်ဆိုတာ practical blog တစ်ခုကို tutorial သဘောမျိုးရေး ပြီး တင်ထားပေးပါတယ်
အဆင်ပြေပါစေ...!"Jul 16, 2012lin lin replied to lin lin's discussion Blog တင်ဖို့အကြောင်း"ညီမကblog တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ပုံကိုလည်းသိချင်တယ်။အမှန်ပြောရရင်ခုမှblog တစ်ခုရေးဖို့ကြိုးစားနေတာပါ။ဘယ်ကစလုပ်သင့်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြပေးပါ"Jul 15, 2012Phyo Wai (ဗျိုင်းဖြူ) replied to lin lin's discussion Blog တင်ဖို့အကြောင်း"ဘယျလိုအကူအညီမြိုးလိုခငျြတာလဲခငျဗြာ။ဆိုလိုတာက blog တခုကိုတညျဆောကျပုံကိုသိခငျြတာလား၊ ဒါမှမဟုတျ hosting ၊ domain တှေ နဲ့ ဘယျလိုခြိတျဆကျလုပျဆောငျရမယျဆိုတာမြိုးလား ၊ ဒါမှမဟုတျ free domain ၊ free hosting တှကေိုသိခငျြတာလား???အဲဒါလေးတှသေိရရငျ…"Jul 15, 2012 More... RSS
I cannot install at C: partation and I can only install at D: patation. In this partation I can only install Window 7. I cannot install Window XP. What error. Please tell me about this error. If ever…
Posted on August 15, 2011 at 11:54pm 1 Comment
I cannot install at C: partation and I can only install at D: patation. In this partation I can only install Window 7. I cannot install Window XP. What error. Please tell me about this error. If every one know.
Please reply to me. Continue AddaBlog Post